Xiriirka labada qof ka dhaxeeyo mar walba waa Akhlaaqda xitaa haddii uu dhamaado xiriirkaas.
In aad wax baratay shahaado waad u qaadan kartaa balse in aad wax fahamto mar walba shahaado uma qaadan kartid.
Fahamka ma ahan sida tacliinta ama Aqoonta la barto oo kale, waa garasho aan shahaado mar walba laga qaadan.
Shahaadada waxay caddayn u tahay in aad Mutacallim tahay ama qof wax bartay tahay, balse uma ahan in aad tahay Faahim.
Meel la dago dunida waxaa ugu wanaagsan qalbi ku jecel, hadana sidaa ay tahay qalbiyada dadka ma ahan meel lagu waarayo oo sida Janna oo kale ah, sidaas darteed, waxba ha isku daalin in aad baaqi kusii ahaato Qalbiyada Dadka.
Ha daba socon qalbigaada mar walba, qalbigaada mar walba ha ahaado mid kaa dambeeya oo aad sidatid, maxaa yeelay qalbigu maahan mid Luga lagu socda leh.
Nolosha waa mid aad adiga ku nooshahay ee ma ahan mid iyada kugu nool, sidaa darteed, nolosha ha ka quusan iyada ha quusato inta adiga ku nool aad ka quusan lahayd.
6-Sabar, jacayl, farxad
Nin sabar kaashaday nolosha kuma jabo.
Nin jacayl kaashadayna naf huris badan ayuu diyaarsaday.
Ninka farxadda la qaybsada dadka kalana wuxuu fahmay qiimaha insaanimada.
Qofna ha uga lulan sida geed camal maxaa yeelay dadku ma ahan sida geedka oo kale adigana ma tihid sida Daanyeer mar walba ku nool geedaha korkooda.
Ha aaminin waanaaga iga muuqdo, waan hubaa in wax iga xun aysan jirin marka qalbigu i xanuunayo!!!
Cabsida dhimasha kaama hor istaagto ee nolosha ayey kaa hor istaagtaa.
In aad wanaag baahinta afka ka sheegto waxaa ka wanaagsan in dhaqankaaga laga arko.
Dhaqankaaga waa ka farriin gudbin dheeryahay waxa aad afka ka sheegato.
In duruufa nololeed dartood aad ula noaato qof mar walba agtiisa aad xanuun ku dareemayso waa dullinimo tan ugu xun.
Ma jirto wax la dhaho waxaas dartood ayaan u noolaanayaa ama wax u samaynayaa.
Wax walba oo ku qancin ama ku xanuujiya xaq waxaa u leedahay in aad iska soo gunaanado, maxaa yeelay dhaxalka aad ka helayso ayaa ah mid sii abuuraya murugo iyo dullinimo kale oo noloshaada kusii joogtowda.
Ehelnimada waa is fahamka, qofka mar walba ku fahmi karo ayaa ah kan ehelka kuu ah.
Ehel laguma noqdo wada dhalasho ama is dhalid ee waxaa lagu noqdaa is fahamka iyo isku iimaan sheegashada.
Qofka mar walba ku wanaajiya haddii aadan wanaagiisa uga abaal gudi karin waxaa ka wanaagsan in aad ugu abaal guddo mahadnaq iyo dhiiri galin waxa uu kuu qabtay, ma ahan in aad usii tilmaanto baahidaada.
Haddaadan ka tagayn xusuus wanaagsan waxaa dhaanta in aadanba xusuus ka tagin, sidoo kale in aan lagu xasuusan ayaa ka wanaagsan inta xusuus xun lagugu xusuusan lahaa.
Qalbi qurxoon doorashadiisa ayaan kugu ogahay ee qaab qurxoon ha ku qaldamin.
16-Raja u yeel kuwa aan rajada lahayn
Guushaada waxay waxtar leedahay marka aad raja u yeesho kuwa aan rajada lahayn ee quustay.
Jacayl aad siiso kuwa cadowtinimada caadada ka dhigtay.
Khayr ugu deeqdo kuwa xaasidiinta kugu ah.
U wanaagsanaato kuwa u baahan wanaagaaga.
17-Qabasha ma leh
Qabasha ma leh ficilka iyo hadalka maangaabka.
Balse qofka caaqillka ah eray walba uu dhaho waa mid loo xisaabin karo.
18-Ha is riixin
Inta badan uu is riixaagu bato waa inta badan oo meel qaldan aad ku dhacdo.
19-Xoog doofaar lagu eryay
Waad jeclaan lahayd ama jeclaan kartaa in aad wax badan wanaajiso/hagaajiso, balse qofka aad u wanaajinayso ama u hagaajinayso haddii uusan baraarug ku ahayn taas, dadaalkaga wuxuu noqonayaa xoog doofaar lagu eryayay.
Laakin in aad wax walba si daacad ah u qabatid waxay raali galisaa naftaada.
Wahelka nolosha ugu macaan waa lamaanta naftaada balse waxay kasii macdahay marka lamaanta naftaada ay tahay qof caqli badan.
Wax ugu haboon ma jiraan ninka raga ah lahaanshiyaha wahel caqli iyo sabar u saaxiib ah, taas hadduu helana waxaa soo muuqato quruxdiisa iyo guushiisa.
21-Waaliduba marbey Janno noqotaa!!
Mararka qaar waalida waa Janno oo kale, balse inaga sidaa uma dareeno.
Waad dhihi kartaa qofka waalan nolol ma haysto, waxaasa ogaataa in noloshada dunida mid ka fiican oo murug la’aan ah uu haysto.
Muuqaalka kaaga muuqda qofka waalan ha iska ahaado muuqaal aan falcelin wanaagsan bixinayn, balse waxaad ogaataa inta adiga dambi kugu socota iyo inta culays ku saaran in aysan qofkaas ku socon saarnayna.
Quruxdaada waa dhaqankaaga iyo dabeecaddaada.
Sida aan uga baqano in sharafteena ay lunto ama lagu ciyaaro ugama baqano dhimashada mana uga fakarno.
24-Ugu deeq riyo wanaagsan
Inta dunida aad ku nooshahay ka warqabta waa in aad ugu deeqdaa riya wanaagsan oo ay kugu xusuustaan.
25-Aqoontu way hadashaa
Aqoontu way hadashaa xikmadduna way dhagaysataa.
26-Waan ku inkaarayaa
Kkkkkkkk maanta waan kaa qoslinayaa waana ku inkaarayaa, maxaan kugu inkaarayaa ma taqaanaa?
in inta noloshaada ka dhiman ay ilmaha kuu dhalan doona dhashaan ayaga oo qaawan.
Waad dhimanaysaa waad ogtahay oo waa hubaal taas marka waqtigaada soo galo, balse waxaa nasiib darra ah in adiga oo sida aad rabto u noolaan aad dhimato.
Ugu noolow noloshaada sida aad doonto ee ku farax galisa.